पीपीएल क्रिकेट : पोखरा पल्टनद्वारा विराटनगर टाईटन्सलाई १ सय ९८ रनको लक्ष्य « Lokpath
२०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार ०७:१९
पीपीएल क्रिकेट : पोखरा पल्टनद्वारा विराटनगर टाईटन्सलाई १ सय ९८ रनको लक्ष्य
प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार ०७:१९
पोखरा । पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट ‘पीपीएल’ शुक्रवारबाट शुरु भएको छ ।
सर्वाधिक पुरस्कार राशी रहेको यो प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पोखरा पल्टन र विराटनगर टाईटन्स भिडिरहेका छन् । पोखरा रंगशालामा भएको खेलमा पोखरा पल्टनले विराटनगर टाईटन्सलाई जितका लागि १ सय ९८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
विराटनगरका लागि सन्दीप लामिछानेले २ विकेट तथा शाहब आलमले १ विकेट लिए । जारी प्रतियोगितामा ६ टिमको सहभागिता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कप : बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित
होबार्ट हरिकेन्स र सिड्नी थन्डर भिड्दै, सन्दीप प्लेईङ सेटमा
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल) टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा अहिले होबार्ट हरिकेन्स
काठमाडौं । अस्ट्रेलिया र भारतबीचको चौथो तथा अन्तिम टेस्ट रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ
प्रधानमन्त्री कप : गण्डकी प्रदेशको पहिलो जित
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो
रेशम खेती तर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै
लोप हुँदै पानी घट्ट
के तपाईलाई रिँगटा लाग्छ ? सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत…
पर्यटकको पर्खाइमा ‘खप्तड’, आन्तरीक पर्यटक घुमाउन हेली टूर